Somaliland oo ka dayrisay xaaladda arday ku xanniban Deegaanka Tigreega | Berberanews.com
Home WARARKA Somaliland oo ka dayrisay xaaladda arday ku xanniban Deegaanka Tigreega
Somaliland oo ka dayrisay xaaladda arday ku xanniban Deegaanka Tigreega
Hargeysa-(Berberanews)-Safiirka Somaliland ee Itiobiya Ambassador Yusuf Maxamed Guuleed, ayaa wallaac xoog leh ka muujiyay arday reer Somaliland ah oo ku go’doonsan magaalada Maqale ee Ismaamulka Tigreega oo ay ku hareeraysanyihiin ciidammada Itoobiya.
Ambassador Yusuf Maxamed Guuleed, waxaa uu xaqiijiyay in inta ay hubaan18 arday oo reer Somaliland ahi ku suganyihiin deegaanka Tigreega oo dagaal u dhexeeyo Ciidammada Dowladda ay ku jiraan xaalad halis badan.
“Waa arrin aad u cakiran oo naxdin badan, inagana si gaar ah bay inoo taabanaysaa oo arday badan oo takhasus u tagtay oo18 ah, lagana yaabo inay intaas ka badanyihiin oo qaar baa iskood u tegay oo waalidku diray, qaar baa jaamacaduhu toos u direen.”
Ayuu yidhi Ambassador Yuusuf oo khadka telefoonka ugu warramay Telefiishanka Bulsho.
Ambassador Yusuf Maxamed Guuleed, waxaa uu rajo adag ka muuniyay badbaadada ardaydaas oo uu sheegay inan cidna geli karin, cidna ka bixi karin deegaanka Tigreega oo la hareereeyay.
“Markaa meel dagaal ka socdo oo cid gelaysa iyo cid ka baxaysa toona aanay jirin oo dawladana kala xidhiidhnay oo iyaga laftooda ciidankoodii aanay geli kari karin, cid kalena geli kari mayso bay yidhaahdeen. Xalay oo u danbaysay wasaaradda Arrimaha debedda ayaan kala hadalnay marka haddii xaalladu sidan dhaanto bal in qollada UNka la yidhaa ka soo daadgureeya dadka ajaanibka ah ee jooga meesha.”
Halka ka dhegayso waraysigaas oo dhammaystiran.
Ambassador Yusuf Maxamed Guuleed
ardayfa somaliland ee tigree
Previous articleTaariikh Nololeedkii Cumer Carte Qaalib(1930 ilaa 18-Nov-2020 )
Next articleSomaliland concerned about students stranded in Tigray